Museum Museum Pacifica, Bali, Indonezia " Journey-Assist - any Nusa Dua
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Museum Pasifika
Ny faritr'i Azia-Pasifika, toerana misy ny antsasaky ny mponina eran'izao tontolo izao, dia samy hafa be. Maneho foko sy fiteny foko an-jatony, mamorona karazan-kanto endrika zavakanto tsy manam-paharoa mandraka androany.
Sary hosodoko sy sary sokitra ao amin'ny tranombakoka
Ny tranombakoka Pacifica, miorina ao amin'ny kompleks Nusa Dua any atsimon'i Bali, dia natsangana tamin'ny velaran-tany 12 metatra toradroa, izay mampiseho fanangonana zavakanto an'ny vahoaka Pasifika (ka izany no anaran'ny tranombakoka). Ity fanangonana ity dia misy sary hosodoko maherin'ny 000 ataon'ny mpanakanto 600 mahery avy amin'ny firenena 200 any Pasifika. Ny sary hosodoko maoderina dia manjaka eo amin'izy ireo, fa azonao atao koa ny manitatra ny fahalalanao ny tantara sy ny kolontsaina Indoneziana.
Galerie tranombakoka sy sarintany
Efitra I: Sanganasan'ny mpanoratra indonezianina
Efitrano II: sanganasa kanto nataon'ny mpanoratra italianina any indonezia
Efitra III: Asa-kanton'ny Mpanoratra Holandey any Indonezia
Efitrano IV: sangan'asan'ny mpanoratra frantsay any Indonezia
Efitra V: Asan'ny kanto nataon'ny Artista Indo-Eoropeana any Indonezia
Hall VI: Fampiratiana vonjimaika
Efitra VII: Asan'ny zavakanto nataon'ny mpanoratra tany amin'ny saikinosy Indochina: Laos, Vietnam ary Kambodza
Efitra VIII: Asan'ny zavakanto nataon'ny mpanoratra tany Polinezia sy Tahiti
Efitra IX: Ny kanto Vanuatu ary ny sarin'ny nosy Pasifika nataon'i Aloy Pilioko sy Nikolai Mishushutkin
Concourse X: Tapa Oceania
Efitra XI: Azia: Zavakanto kanto maro avy any Japon, Sina, Thailand, Malaysia, Myanmar ary Filipina
Sarintany Museuma Pacifica
Ny anjara toeran'ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina eo amin'ny tranombakoka
Ny tranombakoka Pacifica dia misy amina sary hosodoko manaitra, sary sokitra manerana ny faritra Azia-Pasifika. Ivotoerana ara-kolotsaina manana andraikitra ara-panabeazana sy sosialy, mahasarika mpizahatany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Noho izany, ny tranombakoka Pacifica dia ampirisihina mafy hitsidika. Voalohany indrindra, mendrika hatao izany raha any Nusa Dua ianao (io no misy azy), na dia sarotra aza ny miala eto amin'ny faritra hafa amin'ny nosy.
Fitsipika ao amin'ny tranombakoka Pacifica
Ny fakana sary ho an'ny fampiasan'ny tena manokana dia tsy avela afa-tsy amin'ny galeriana fanangonana. Tsy azo atao ny mampiasa flash na tripod. Ao amin'ny lobby ihany no avela ny fakana sary. Voarara ny famokarana, fizarana na fivarotana sary na horonan-tsary tsy nahazo alalana avy amin'ny Museum.
Ny fampiasana pensily dia avela ao amin'ny galeria. Tsy azo avela ny penina, marika, loko, saribao na pastel. Ireo mpitsidika maniry hanao sary na handika sary kanto dia tsy maintsy mangataka alalana amin'ny birao fampahalalana aloha.
Aza mikasika ny sarin-javakanto, frame, substrate na fonosana miaro.
Fadio ny fihazakazahana, ny kiakiaka ary ny fihetsika mahery setra.
Rehefa mampiasa telefaona finday amin'ny galeriana ianao dia tokony hanaja olona.
Misokatra ny tranombakoka hafitoana isan-kerinandro manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 18.
Ao anatin'ny faritr'i Nusa Dua, ny Tranon'i Pasifika dia mety ho tratran'ny fiara fitateram-bahoaka, ary avy any amin'ny toerana hafa dia tsy afaka mandeha afa-tsy fiara na bisikileta manofa ianao. Afaka, mazava ho azy, ary taxi.
adiresy: Toeram-pivarotana Bali Bali Development Development Corporation (BTDC) Block P, Benoa, South Kuta, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia
telefaonina: + 62 361 774935
Alatsinainy - 10.00 - 18.00
Talata - 10.00 - 18.00
Alarobia - 10.00 - 18.00
Alakamisy - 10.00 - 18.00
Zoma - 10.00 - 18.00
Sabotsy - 10.00 - 18.00
Alahady - 10.00 - 18.00
Sarin'ny Museum Pasifika
Museum Pasifika. Sary hosodoko sy sary sokitra
Cafe ao amin'ny Museum Pasifika
Galeria zavakanto an'ny tranombakoka Pacifica
Museum Museum Pacifica amin'ny sarintany